भयानक बस दुर्घटना, कम्तिमा ५२ जनाको मृत्यु, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
भयानक बस दुर्घटना, कम्तिमा ५२ जनाको मृत्यु
नयाँदिल्ली । भारतको तेलंगनामा भएको बस दुर्घटनामा कम्तिमा पनि ५२ जनाको मृत्यु भएको छ । तेलंगनाको जगतियाल जिल्लामा मंगलबार राज्य परिवहन निगमको बस एक भीरमा खसेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
घटनामा अन्य १८ जना घाइते भएका छन् । मृतक मध्ये २० महिला र ४ बालबालिका रहेका छन् । प्रहरीका अनुसार बस कोंडागडुको पहाडमा रहेको आन्जनेय स्वामीको मन्दिरबाट फर्कँदै गर्दा बस दुर्घटनामा परेको हो ।
दुघटर्ना स्थल तेलंगनाको राजधानी हैदरवादबाट करिब १९० किलोमिटरको दुरी रहेको बताइएको छ । कोंडागडु घाटमा बस भीरबाट खसेको थियो । बसमा ७० जना यात्रु रहेका थिए । स्पीड ब्रेकरमा ड्राइभरले नियन्त्रण गुमाएरपछि यो दुर्घटना भएको बताइएको छ ।
मृतकको संख्या बढ्न सक्ने बताइएको छ । घाइते मध्ये धरैको अवस्था नाजुक रहेको बताइएको छ । तेलंगनाका मुख्यमन्त्री चन्द्रशेखर रावले मृतकका परिवारलाई ५ लाख रुपैयाँ राहत दिने घोषणा गरेका छन् ।